အေးမြတ်မော် – BCGE | Business Coalition for Gender Equality
ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း
စီမံခန့်ခွဲရေးဒါရိုက်တာ၊  YKKO Group of Companies Ltd.
မအေးမြတ်မော်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဦးဆောင်နေသည့်စားသောက်ကုန်ကုမ္ပဏီ “YKKO” ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။်။ သူမသည် (၂၀၁၅) သြဂုတ်လတွင် YKKO အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုခိုင်မာလာစေရန်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ဒေသဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်သို့တိုးမြှင့်လာစေရန်ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည်လက်ရှိတွင် YKKO၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအပြင်၎င်း၏ IT အဖွဲ့၏တိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်ပတွင်လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီသို့မဝင်ခင်တွင်မအေးမြတ်မော်သည် Serge Pun Associates (Myanmar) Ltd တွင် (၃) နှစ်ကျော်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ Corporate Development ဌာန၌ Analyst အဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်ဥက္ကဌ၏ အမှုဆောင်လက်ထောက်အဖြစ် (၂) နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။FMI Air Charter Limited ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်ထောင်ခဲ့သောအဖွဲ့တွင် သူမသည်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ ဥက္ကဌ၏ရုံးခန်း၌နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းသူသည် သုတေသနနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင်အဓိကဆက်သွယ်သူလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
မအေးမြတ်မော်သည် (၂၀၁၁) ခုနှစ်တွင်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှ ပထမတန်းအတတ်ပညာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ သူမသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှ (၂၀၁၁) ခုနှစ်ဇွန်လအထိကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်၏ ပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်သောကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ အသင်း၀င်လည်းဖြစ်သည်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ (၂၀၁၆) ခုနှစ်ဇွန်လအထိရန်ကုန်မြို့ရှိ ဗဟိုအချက်အချာ၏ လက်ထောက်မှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ (၂၀၁၇) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ (၂၀၁၈) ခုနှစ်ဇွန်လအထိ Yangon Hub ၏လက်ထောက်မှူးအဖြစ်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဖုန်းနံပါတ် : +959441441550
လိပ်စာ : အမှတ် ၁၉၉ စိန်လဲ့မေရိပ်သာလမ်း၊ ဂရင်းအင်းယားကွန်ဒို၊ အခန်းအမှတ် ၄၀၁၊ ၄ ထပ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။
ကျား၊ မတန်းတူညီမျှရေးအတွက်စီးပွားရေးအဖွဲ့ (BCGE) သည်အကျိုးအမြတ်မယူသော အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုကိုမြှင့်တင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားသောကုမ္ပဏီများ ပေါင်းစည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
© 2020 MBCGEA.
READY TO Work - Unit 3, Mercure Hotel, No.17, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar.
+959441441550